12/04/12 ~ Latha Mobile 0945 000 1727
ရွှေည၀ါဆရာတော်လည်း မျက်ရည်တွေ ကျလို့. . .
11:54 PM ko pae Lay No comments
Yezar Ni shared April Maung Maung's photo.
တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ မျက်ရည် ကျရတာပါ။
ခင်ဗျားတို့ ရှို့လိုက်တဲ့ မီး ဟာ
အဲဒီ သံဃာတွေ ရဲ့ အရေပြားကတဆင့်
ကျနော်တို့ အားလုံး ရဲ့ နှလုံးသား ကို လောင်ကျွမ်းလို့
ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုနေသလဲ ဆိုတာပါပဲ
ဒါကို ရက်ရက်စက်စက်သေရာပါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင် လုပ်လိုက်ကြတယ်။
ပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အစိုးရတဲ့. . .
ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရတဲ့
၂၀၁၅ မှာ ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံဦးမတဲ့
ခင်ဗျားတို့ မို့ မရှက်မကြောက်ဗျာ
အဲဒီ ဦးပိုင်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးဟာ
အဲဒီလောက်ထိ ပြည်သူကို ရန်ပြုတယ်ဆိုတာသိရင်ဖြင့်
သူ့ကုန်စည်၊ သူ့ယာဉ်ကား၊ သူ့စီးပွားမှန်သမျှ ဆန့်ကျင်ကြပါ။
ဒီလို ပြည်သူတွေ ကြိမ်မီးအုံးသလို ပူလောင်ဆင်းရဲနေရတဲ့အချိန်မှာ
စည်းစိမ်ဥစ္စာအပြည့်အစုံနဲ့ တိုင်းပြည်ထဲ ဇိမ်ခံလို့နေတယ်။
ဒီ လို ကျူးလွန်ခဲ့တာကို မြိန်ရည်ယှက်ရည်ပြောဆိုပြီး အောင်ပွဲခံလို့နေချင်နေမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ဆရာမောင်ဝံသ စတဲ့
ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကို အသိမပေးဘဲ ကော်မရှင်ဖွဲ့
ပြီးရင် ဒီလုပ်ရပ်အတွက် အချင်းချင်း လက်ဝါးချင်းရိုက်လို့ လှလှပပ နိုင်ငံရေး ကစားလိုက်နိုင်တယ်လို့ အပြန်အလှန် ချီးယားလုပ်နေကြမယ်။
မနက်ဖက် ဂေါက်ရိုက်ရင်း အရသာခံမယ်။
ညဘက် ဘီယာသောက်ရင်း အရသာခံမယ်။
ဒီလို ပြည်သူတွေ တိုင်းလုံးကျွတ်၊ ပြည်လုံးကျွတ် ကြိမ်မီးအုန်းနေချိန်မှာပဲ
သူတို့သားမယားတွေက အနီးအပါးက တိုင်းပြည်တွေမှာ ရှော့ပင်းထွက်မပျက်၊
ကျနော်တို့ဟာ ပင်ကိုယ်စရိုက်အားဖြင့် အင်မတန် အေးအေး နေတဲ့
တဆက်တည်းမှာ တိုင်းပြည်ကြီးဆင်းရဲနောက်ကျနေတာကို လွတ်မြောက်ချင်ကြပြီ။
ကျနော်တို့ နောက်ထပ် မရင်းချင်ကြတော့ဘူး။
ဒီ့အတွက် ကျနော်တို့ သိစိတ်၊ မသိစိတ်ကနေ
သူတို့ပြောင်းပါပြီ ဆိုတာကို ဇွတ်လက်ခံလို့
တကယ်က သူတို့ဟာ ပြောင်းတာလား၊
ကျနော်တို့ကို အသုံးချလို့ သူတို့တည်မြဲရေး အတွက် ဆက်တည်ဆောက်နေတာလား ဆိုတာ ဒီဖြစ်ရပ်တွေက သက်သေပြလို့နေတယ်။
ပြည်သူတွေဟာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်လို့နေပါပြီ
တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးချခံရတာ မဟုတ်
ပြည်သူကို ခုလို သတ်ဖြတ်ဖိနှိပ်ဖို့ အသုံးချမှာ ဆိုတာကို
မြင်အောင် ကြည့်ပါတော့. . .
သန်းခေါင်ကျော်မှ အရုဏ်သစ် ကို ရနိုင်ပါလေရဲ့။
10:03 PM ko pae Lay No comments
Wai Hnin shared Myanmar Online IT News's photo.
‎##ရေနဲ့ မောင်းမယ့် ကားကြီး Mercedes-Benz Ener-G-Force##
ဂျာမနီ Mercedes မှ ရေနဲ့မောင်းမယ့် Concept ကားတစ်စီးကို လော့အိမ်ဂျ လစ် မော်တော်ယာဉ် ပြပွဲမှာ ဝင်ရောက်ြ
ပသသွားခဲ့ပါတယ်။ တကယ် ထူးထူးခြားခြား ပါပဲ။ ရေ နဲ့မောင်းမယ်ဆိုတော့ ကားရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ဘယ်လိုလည်းလို့ အများက စိတ်ဝင်စား ကြပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ အင်ဂျင်က hydro-tech converter
ဖြစ်ပါတယ်။ ရေထဲမှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ထုတ်ယူပြီး ပါဝါဆဲလ် အဖြစ် ဖန်တီးလို့ ကားကို မောင်းပေး မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့
အိတ်ဇောပိုက်မှာ ထွက်မယ့် အငွေ့က ကာဘွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက် မဟုတ်ပဲ ရေငွေ့များ ဖြစ်မှာဖြစ် ပါတယ်။ ဟိုးယခင် အချိန်ခါက ရေနွေးငွေ့ အင်ဂျင်လိုလည် မဟုတ်ပါဘူး။ ရေနွေးငွေ့ အင်ဂျင်တုန်းက ရေနွေးငွေ့ ဖိအား-Pressure အသုံးပြုမှုကို အခြေခံတာ ဖြစ် ပါတယ်။ ယခု ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြောင်းလဲ အင်ဂျင် ကတော့ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ကို လောင်စာ အဖြစ် အသုံးပြုပြီး သာမန် လောင်စာဆီ အင်ဂျင် ပေါက်ကွဲမှု လိုမျိုး စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျာမနီ ကုမ္မဏီ တစ်ခုအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဖန်တီးလိုက်တဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆီလျော်တဲ့ ပထမဆုံး ရေအင်ဂျင် ဖြစ်ပါတယ်။ G-Force က လေးဘီးမောင်း စနစ်သုံး SUV ကားကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် ထုတ်လုပ်နေကျ SUV တွေထွက် ပိုမြန်ဆန်မှာမို့ G-Force ဆိုတဲ့ နာမည် ထည့်သွင်းပေး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။Concept အဆင့်ရှိ ကား Mercedes-Benz Ener-G-Force ကို မကြာမီ နှစ်များ အတွင်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချ နိုင်တော့ မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
9:16 PM ko pae Lay No comments
၁။ ပုရွတ်ဆိတ်ကျွင်းဝတွင် သကြားထဲတွင် ငရုပ်သီးမှုန့် အနည်းငယ်ရောကာချထားပါ။ ပုရွတ်ဆိတ်ထွက်စားပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ပုရွတ်ဆိတ်ရင်ပူသော ကြောင့်ရေလိုက်ရှာလိမ့်မည်။
၂။ ပုရွတ်ဆိတ် ရေသောက်နေစဉ်တွင် နောက်မှ နေကာ ပုရွတ်ဆိတ်ကိုရေကန်ထဲသို့ တွန်းချလိုက်ပါ။ ပုရွတ်ဆိတ်ရေစိုသွားသောကြောင့်အခြောက်ခံရန်
၃။ ပုရွတ်ဆိတ် မီးင်္လှု နေစဉ်နောက်မှ တွန်းချလိုက်ပါ။ ပုရွတ်ဆိတ် ဒဏ်ရာ ရသွားမည်။ ထိုအခါပုရွတ်ဆိတ်ဆေးရုံတက်ရမည်။
၄။ ပုရွတ်ဆိတ်ဆေးရုံတက်နေစဉ် သူ့ ကိုပေးထားသော oxygen ပိုက် အားဆွဲဖြုတ်ကာ အလွယ်တကူသတ်လိုက်နိုင်ပါသည်။ (သတိ)
မီးလောင်တိုက်(ကဗျာရှည်လေးပါ အဆုံးထိ သည်းခံဖတ်ပေးပါ)
9:15 PM ko pae Lay No comments
Myint Thein and3other people shared ရင်ထဲကလာသော's photo.
ဘေးပေါင်းကျရပြီ . . .
ဂါဇာက ပြည်သူတွေရဲ့ အိမ်အပြန်
မဟုတ်ဘူး . . . မဟုတ်ဘူး . . .
မတရားသဖြင့်ပဲ. . .
ရေတော့ရေ . . . ငရဲရေတွေ
တောင်ကချိုင့်ခွက် တောက ကတုံး
ဒီမိုကရေစီ . . .
သွေးဒီမိုကရေစီ . . . သွေးဒီမိုကရေစီ။
အစိုးရဆိုတာ အစကပဲ ရိုးရတာလား။
ဆေးပေါင်းခတဲ့ည . . .
စစ်တွေမြို့မှ အမျိုးသမီး တစ်ဦး လက်ပံတောင်းတောင် အကြမ်းဖက် နှိ်မ်နင်းမူကို မ ကျေနပ်၍ တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြ
5:22 AM ko pae Lay No comments
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး အတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်နေသည့် သံ ဃာတော်များနှင့် ဒေသခံများကို အာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့သည့် အပေါ် ရှုတ်ချ ကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် စစ်တွေမြို့တွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးက တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသည်။
တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသူမှာ စစ်တွေမြို့မှ အမျိုးသမီးအရေး လှုပ်ရှာနေသူတစ်ဦး ဒေါ်ညိုအေး ဖြစ်သည်။ သူမသည် ဆိုင်းဘုတ် တစ်ခု အား ကိုင်ဆောင်ပြီး ယန့ နေ့လည် ၂ နာရီခွဲမှ ၄ နာရီအထိ စစ်တွေမြို့ လောကာနန္ဒာစေတီမှ လမ်းမကြီးအတိုင်း လမ်းလျှောက် သွား ပြီး နာရီစင်ဝိုင်းမှ တစ်ဆင့် မောလိပ် ရပ်ကွက်ကို ဖြတ်ကာ မင်းဘာကြီးလမ်းရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးများကွန်ယက်ရုံးထိ ချီတက် ဆ န္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။
တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြရသည့်အကြောင်းကို သူမက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ အခုလို ကျမတို့ဘက်က ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံ ကိန်း အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေအ တွက် အထောက်အကူ တခုဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ ပြီးတော့ သံဃာတော်တွေ အဆမတန် ဒဏ်ရာသွားခဲ့ကြရတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကိုရှုတ် ချ တဲ့ အနေနဲ့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လက်ပံတောင်းတောင် ကိစ္စကို ရခိုင်ပြည်သူ တွေကို ပိုပြီး သိစေချင်တဲ့ အတွက် လုပ်တာ ဖြစ်ပါ တယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသည့်အတွက် ဒေါ်ညိုအေးအား ရဲစခန်းသို့ခေါ်ယူ သတိပေးမူ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သူမက ဆက်ပြော သည်။
“ နောက်ဒီ လိုမျိုး ဆန္ဒပြမယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာမှာ လျှောက်လွာတင်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ယူရမယ်လို့ ပြော တယ်။ ကျမကလည်း တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ပုဒ်မ ၁၄၄ နဲ့လည်း ငြိစွန်းမှု မရှိတဲ့ အတွက် ခွင့်ပြုမိန့် ယူစရာ မလိုတဲ့အကြောင်းကို ပြန်ပြောခဲ့တယ်” ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာ ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ်ဝန်ပေါင် ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသည့် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် ကျေး ရွာ အများ အပြား ပြောင်းရွေ့ခံရပြီး ဒေသခံများပိုင်ဆိုင်သည့် လယ်မြေ အများအပြား ဆုံးရှုံးရသည့် အပြင် သာသနိက အဆောက်အဦး များပါ ဖျက်ဆီးခံရသည့်အတွက် သံဃာတော်များနှင့် ဒေသခံပြည် သူများက စီမံကိန်း ရပ်တန့်ရန် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေ ကြ သည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသည့် သံဃာများနှင့်ပြည်သူများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အင်အား အလွန်အကျွံ သုံးပြီး နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့အာရုံတက်ချိန်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းရာတွင် မီးလောင်စေ သည့် ဓါတုလက်နက်များ ဟု အများက ယူဆနေသော လက်နက် တမျိုးကို သုံးစွဲ ဖြိုခွင်းခဲ့သည့် အတွက် သံဃာတော် အများအပြားမှာ ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရရှိခဲ့သည့်အတွက် ဆေးကုသမှု ခံယူနေ ကြရသည်။
ယခုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကို ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် ရန်ကုန်အပါအ၀င် မြို့ကြီးတချို့တွင် သံ ဃာတော်များက ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်နေကြပြီး အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှလည်း ကြေငြာ ချက်ထုတ်ကာ အာဏာပိုင်များ၏ လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချနေကြသည်။
အာဏာပိုင်များမှ ယခုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုကို ရှုတ်ချသည့်ဆန္ဒပြမှုများ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ အပြားတွင် ပေါ်ထွက်လာသည့်အတွက် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင် ၃၀ ပါ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မီတီတစ်ခုကို သမတဦးသိန်းစိန်က ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် နေ့က ဖွဲ့ပေးလိုက်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်တွင် ကော်မီတီ၏ တွေ့ရှိချက်များကို သမတထံသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by ကိုကို
ကမ္ဘောဒီးယားရှိ တရုတ်ဆောက် ဆည် ပြိုကျ၊ အလုပ်သမား လေးဦး ပျောက်ဆုံး
hlyothwetuyin | 12/03/2012 05:47:00 AM |
ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံက တာဝန်ယူ တည်ဆောက် ပေးလျက် ရှိသော ဆည် ဆောက်လုပ် နေစဉ် ပြိုကျ ပျက်စီးသဖြင့် အလုပ်သမား လေးဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာ ရရှိ သွားပြီး အလုပ်သမား လေးဦး ပျောက်ဆုံးလျက် ရှိကြောင်း Strait Times သတင်းစာတွင် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဆည်ကြီး ပြိုကျ ပျက်စီး ရခြင်းမှာ ယင်းဆည်က တောင့်ထားရသော ရေပမာဏ အလွန် များပြားပြီး၊ ရေများ စိမ့်လျက်ရှိ သောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဆည်ကြီး တည်ရှိရာ အတေးမြစ်ကမ်း ဒေသရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး သန်လန် က ပြောကြား သည်။
ကျွမ်းကျင်သူ များက အဆိုပါ ဆည် ပျက်စီး ရခြင်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် နေစဉ် အတွင်း ဆည် လုပ်ငန်းခွင် ကို ရပ်တန့် ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းရဲတပ်ဖွဲ့ အရာရှိကပင် ပြောကြားသည်။
ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ် ဓါတ်အား လိုအပ်ချက် ရှိနေသည်မှာ မှန်သော်လည်း မြစ်ကြောင်း များကို ဆည်ဆောက်လုပ်မှု များကို သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အရေး၊ လူမှုရေး ရှုထောင့် များမှ ဝေဖန်လျက် ရှိကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထု ကန့် ကွက်မှုကြောင့် ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ဆောက်လုပ်မယ့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း
5:19 AM ko pae Lay2comments
အင်တာနက် သုံးရာတွင် လုံခြုံစေရန် Firefox ရဲ့ Feature တစ်ခု
5:17 AM ko pae Lay No comments
8:40:00 PM အမျိုးကောင်း သား No comments
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာက အင်တာနက် အသုံးပြုတဲ့သူအားလုံးလိုလို Mozilla Firefox Browser ကိုပဲ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ Firefox ကိုပဲ အသုံးများပါတယ်။ နည်းပညာဆိုတာက ချစ်ဖို့ကောင်းသလို မုန်းဖုိ့လဲ ကောင်းတယ် ဆိုရမယ်။ အွန်လိုင်းဆိုတာက ကောင်းတဲ့သူ ရှိသလို မကောင်းတဲ့ သူတွေလဲ အများကြီးပဲဗျ။ ဆိုလိုချင်တာက ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်ထဲမှာ နေ့စဉ် လည်ပတ်နေကြတယ်။ ဟို site လေးဝင်ကြည့်လိုက်
ဒီ site လေး ၀င်ကြည့်လိုက် ။ facebook လေးသုံးလိုက် ၊ Gtalk လေး Chat လိုက်ပေါ့ :P ။ အဲဒီလို ဟို site ၀င် ဒီ site ၀င်တာက အရေးမကြီးဘူး။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ မကောင်းမှု ပြုနေတဲ့ လူတစ်ချို့က အဲဒီ website တွေကနေ တဆင့် ကိုယ့်ကို ခြေရာခံလာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - လွယ်လွယ်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ဆီကို ၀င်လာတဲ့ gmail က ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်ဒေသ က Send လုပ်လိုက်သလဲဆိုတာကို ခြေရာခံကြသလိုမျိုးပေါ့။ Networking အခေါ်အဝေါ်အရဆိုရင်တော့ tracert လိုက်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Mozilla Firefox က အသုံးပြုတဲ့ user တွေအတွက် Do Not Track ဆိုတဲ့ Feature တစ်ခု ထည့်ထားပေးပါတယ်။ user တွေအနေနဲ့ သတိမထားမိကြဘူး။ ဒီလိုပဲ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သုံးတဲ့သူဆိုလဲ ဆိုင်ရှင်က ဖွင့်ထားပေးတဲ့ အတိုင်း အလွယ်တကူပဲ ၀င်သုံးလိုက်တယ်။ တချို့ဆို Gtalk, facebook သုံးပြီး ကိုယ့်အကောင့်ကို Sign out လုပ်ရမှန်းတောင် မသိ့ဘူး။ နေ့စဉ် အင်တာနက်သုံး၊ အင်တာနက်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေ ၊ အင်တာနက်နဲ့ ငွေရှာနေတဲ့ သူတွေ ၊ လေ့လာနေတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ Firefox ရဲ့ Do Not Track ဆိုတာကို Enable ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ တချို့ တချို့သော website တွေက ခင်ဗျား ၀င်ကြည့်နေတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာလေး အတွင်း၊ ခင်ဗျား သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အချိန်အပိုင်းအခြားလေး အတွင်းမှာပဲ ခင်ဗျားရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ရယူသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Step (1) Firefox Browser ရဲ့ ဘယ်ဘက် အပေါ်ထိပ်က Firefox Button ကိုနှိပ်ပါ။ Menu တစ်ခု ကျလာရင် Option ထဲကို ၀င်ပါ။
Step (2) Option Box ကျလာပြီဆိုရင်တော့ Privacy Tab ထဲက Tracking အောက်မှာ ရှိတဲ့ Tell Website I do not want to be tracked ကို check ပြုလုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Step (3) Check ပြုလုပ်ပြီးချိန်မှာတော့ ပြောင်းလဲထားတဲ့ setting တွေကို အတည်ပြုဖို့ အတွက် ok ကိုနှိပ်ဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့။
Short Note : Firefox Option > Privacy > Tracking > tell website i do not want to be tracked > Check On
Mozilla Firefox ကို အသုံးပြုတဲ့ user တွေအနေနဲ့ အခု Do Not Track ကို Enable ပြုလုပ်ပြီး အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Website တွေကနေ တဆင့် မိမိတို့ရဲ့ Information တွေကို ခိုးယူနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ ... လေးစားစွာဖြင့် ..... စဦးသူ
တန်ဆောင်တိုင် မဏ္ဍပ်မှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ဒေါ်စု ပြက္ခဒိန် ကြံ့ခိုင်ရေးမှ ဖြုတ်သိမ်း
5:16 AM ko pae Lay No comments
hlyothwetuyin | 12/03/2012 04:40:00 AM | ပြည်တွင်းသတင်းများ
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့ နယ်၊ ဥက္ကံမြို့ တွင် နှစ်စဉ် ကျင်းပ ပြုလုပ် လျက်ရှိသော တန်ဆောင်တိုင် ဆွမ်းကြီး လောင်းပွဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရပ်ကွက် မဏ္ဍပ်တွင် ထားရှိသော အလှူရှင် ဆရာလေး မသုသိင်္ဂီနှင့်မဓမ္မတို့လှူဒန်းထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် အမေရိကန် သမ္မတ မစ္စတာအိုဘားမား တို့ နှစ်ဦးပုံပါ ပြက္ခဒိန်တစ်ခု၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံပါ ပြက္ခဒိန်တစ်ခု တို့ ကို ( ၂၈.၁၁. ၂၀၁၂ ) ရက်နေ့ ညဦးပိုင်း တိုက်ကြီးမြို့ နယ် တရားသူကြီးနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကိုယ်စားလှယ်တို့ နှစ်ဦး လာရောက် ကြည့်ရှု ပြီးနောက် ညဉ့်နက်ပိုင်းတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီမြို့ နယ် ( EC ) ဦးစိုးစိုး၊ အနော်ရထာ ရပ်ကွက် နိုင်ငံရေးမှူး ဦးမိုးကျော်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ခိုင်တို့ မှ ဖြုတ်သိမ်း သွားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ထိုကိစ္စကို မကျေနပ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရပ်ကွက် (NLD ) ရပ်ကျေး ကော်မရှင် ဥက္ကဌဦးတင်ဇော်မျိုး ( ခ ) ကောက်ကောက် မှ စုံစမ်းရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ လူကြီးများ လာရောက်၍ မသင့်တော်သဖြင့် ဖြုတ်သိမ်း ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားပါသည်။
ထိုပြက္ခဒိန်နှစ်ခုမှာဦးကျော်ခိုင်နှင့် အပေါင်းအသင်း ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရပ်ကွက်နေ
ဦးဝင်းရွှေနှင့် ဦးမင်းလွင် တို့ ထံတွင် ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
သီချင်းနားထောင်ရင် ဂီတာ လက်ကွက်ပါပြတဲ့ Go PlayAlong v2 (3MB)
7:27:00 PM အမျိုးကောင်း သား
ကျွန်တော်ကတော့ ဂီတာ အကြောင်းလည်း မသိပါဘူး ဒီကောင်လေးက 3MB ဘဲရှိပါတယ်
စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ http://goplayalong.com/ မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်
Download>>> go4up (or)zshare (or)freehostina
5:10 AM ko pae Lay No comments
အစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) အကြား တိုက်ခိုက်မှုများ ယခု ဒီဇင်ဘာ လဆန်းပိုင်းမှ စတင်၍ ပိုမို ပြင်ထန်လာ ပြီး စစ်တပ်အင်အားလည်း တိုးချဲ့ထားကြောင်း သိရသည်။
တိုက်ပွဲများသည် ကချင်ပြည်နယ် ပန်ဝါဒေသနှင့် မိုးမောက်မြို့နယ်တို့တွင် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ကြာင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တွဲ ဖက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးလနန်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နဲ့ ၂ ရက် ပန်ဝါဒေသမှာ တိုက်ပွဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်။ တပ်ရင်းကတော့ ခြေလျင်တပ်ရင်း (ခလရ) ၇၇ နဲ့ ၇၄ တပ် ရင်း ၂ ခုပေါင်း တပ်ဖွဲ့နဲ့ ၂ ရက်လောက် တနေကုန် တိုက်ပွဲဖြစ်တာ ရှိတယ်” ဟု ၎င်း က ဆိုသည်။
၂ ရက်အတွင်း အစိုးရတပ်နှင့် KIA တို့ တိုက်ပွဲ စုစုပေါင်း ၉ ကြိမ်ခန့် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ KIA ဘက် ၁ ဦး ကျဆုံးပြီး ၁၂ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ ကြောင်း၊ အစိုးဘက်တွင်လည်း အကျအဆုံး ရှိကြောင်း ဦးလနန်က ဆက်ပြောသည်။
လတ်တလောတွင် တပ်မ ၉၉ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၂ ရင်းခန့် မိုးကောင်းမြို့နယ်မှ ဖားကန့် ဒေ သသို့ စစ်တပ်အင်အား ၃၀၀ နီးပါးခန့် တိုးချဲ့ထားပြီး KIA တပ်ရင်း ၃ အဖွဲ့ဝင်များ လှုပ်ရှားနေသည့် ၀ိုင်းမော်ဒေသတွင်လည်း အစိုးရတပ် နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“နိုဝင်ဘာလလည်တုန်းက လက်နက်တွေ ရိက္ခာတွေ ကားအစင်း ၃၀ ကျော်နဲ့ ဖားကန့်ကို အရင် ပို့ထားပြီပြီ။ အဲဒီကို ပို့ထားပြီးတဲ့ အခါ ကျမှ တပ်မ ၉၉ က တပ်ရင်း ၂ ရင်းက တက်လာဖို့ဆိုပြီးတော့ လုပ်ထားတယ်။ ဒီနေ့ သူတို့ သွားလိမ့်မယ်။ ဖားကန့်ရောက်တာနဲ့တော့ အဲ ဒီဖားကန့် ဒေသဘက်မှာ တိုက်ပွဲတွေကတော့ အခုလောလောဆယ် ငြိမ်နေတယ်။ ဆက်ပြီး ဖြစ်လာဖို့ပဲ ရှိတယ်” ဟု ဦး လနန်က ပြော သည်။
အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကို မျက်ခြေမပြတ် လေ့လာစောင့်ကြည့်နေပြီး KIA ဘက်ကလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ဖားကန့်မြို့နယ်တွင်လည်း အစိုးရတပ်များနှင့် KIA တပ်ဖွဲ့တို့ ယခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်းတိုက်ပွဲ များ ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ဒေသအတွင်းရှိ စိုင်း တောင်၊ မှော်မောင်းကုန်း၊ မှော်ဝန်းကြီး၊ မှော်ဝန်းလေး၊ ရှရော်ခနှင့် သန်းကြွယ် အပါအဝင် ကျေး ရွာပေါင်း ၂၀ ကျော်မှ ဒေသ ခံ ၈ ထောင်ခန့် အိုးအိမ်များကို စွန့်၍ ဖားကန့်မြို့ပေါ်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများသို့ ခိုလှုံခဲ့ကြရသးသည်။
အဆိုပါဒုက္ခသည် အများစုမှာ နေရပ်ရင်းသို့ ပြန်သွားကြပြီး ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း ၈ ခုတွင် ၂၀၀၀ ကျော်သာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း ဖား ကန့်မြို့ပေါ်အခြေစိုက် ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း တာဝန်ရှိသူများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်များနှင့် KIA တို့ အကြား ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် KIO ထိန်း ချုပ်မှု အောက်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၆၃၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မိုးကုတ်မြို့ ရှိ သံဃာတော်များ လက်ပံတောင်းတောင်အရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်
hlyothwetuyin | 12/03/2012 06:19:00 AM |
မိုးကုတ်မြို့ ရှိ သံဃာတော်များက လက်ပံတောင်း တောင်အရေး တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည့် သံဃာတော်များအား အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့သဖြင့် အဆိုပါ လုပ်ရပ်အပေါ် ကန့်ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို ယနေ့နေ့လည် ၁နာရီခွဲတွင် ဖောင်တော်ဦး ဘုရား ရင်ပြင် တော်ပေါ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲတွင် မိုးကုတ်မြို့ရှိကျောင်းတိုက် အသီးသီးမှ သံဃာတော် အပါး ၄၀ ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး တစ်နာရီခန့် လက်ပံတောင်းတောင် အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဟောပြောခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရေပူကျောင်းဆရာတော် ဦးက္ကဒြာက က "ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ သံဃာတော်တွေနဲ့ ဒေသခံတွေကို ဒီလိုမျိုး အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့အတွက် ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုး ဘယ်ဘာသာကမှ လက်ခံမှာ မဟုတ်သလို ဘုန်းဘုန်းတို့ ကလည်း လုံးဝလက်မခံပါဘူး ၊ဒါကြောင့် ဘုန်းဘုန်းတို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရ တာပါ" ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲသည် ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီခွဲတွင် ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက လည်း စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဝေမာသိမ့် - Yangon Media Group
လက်ပံတောင်းတောင် အရေး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သံဃာတော်များအတွက် မန္တလေးမြို့ရှိသံဃာတော်များက ယနေ့(ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့)မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
5:07 AM ko pae Lay No comments
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်သိသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ယူဆချက် များ လူထုကြား ကျယ်ပြန့်လာနေသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်သိသော နိုင်ငံ ခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖြစ်သင့်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး လေးစားလိုက်နာမှု၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်မှု စသည်တို့အပေါ် အခြေခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည့် ပုံစံကို မကြာခဏ ပြောဆိုပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဝင်ရောက်လာရေးတွင် ယင်းအယူအဆကို အားပေးအားမြှောက်ပြုခဲ့သည်။
သို့သော် လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး ဆန္ဒပြမှုဖြစ်စဉ် ကာလအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖော်ဆောင်လက်စ နိုင် ငံ ခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားရာတွင် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများ၏ ယုံကြည်မှု မပျက်ပြားရေး၊ နိုင်ငံတကာ စည်း မျည်း စည်းကမ်းများကို လေးစားလိုက်နာပြီး ကတိတည်သည့် နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်ရေးလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ပြောဆိုလာခဲ့ သည်။
မြန်မာစစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်နှင့် တရုတ် ၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်နေသည့် စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် လက်ပံ တောင်း တောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး ဆန္ဒပြ သပိတ်စခန်းများကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းပြီးနောက် မြန်မာ နိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ သံရုံးရှေ့နှင့် တချို့မြို့များတွင် တရုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာ သည်။
ရှေ့နေ ကွန်ရက်အဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့နေ ရှေ့နေကြီး ဦးကြီးမြင့်ကလည်း တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစဉ်အဆက် အိမ်နီးချင်း မိတ် ဆွေ နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ရှေ့ဆက်၍လည်း မိတ်ဆွေအဖြစ် သွားရမည့် နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အလွန်သ တိထား ဆက်ဆံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ဦးသိန်းစိန် သမ္မတ အဖြစ်တက်လာသည့် အစိုးရမတက်မီ ကာလအ တွင်းတရုတ် နိုင်ငံနှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် စီးပွားရေးစာချုပ်များ၊ အခြား ပြည်သူများ မသိရသေးသည့် စာချုပ်များတွင် ပွင့်လင်းမှု မရှိခဲ့ ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ကျနော်တို့က တရုတ်ကို ရန်ဘက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ တောင်းဆိုနေတာ မဟုတ်ဘူး။ သို့သော်လည်း သူတို့ဘက် တဖက်တည်း ချွတ် ယွင်းချက်ကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ တို့နိုင်ငံဘက်က စစ်ဘက် အုပ်ချုပ်သူ၊ စစ်လူတန်းစားဘက် က ပြည်သူကို မလေးစားတာ၊ ပြည်သူကို ပမာမခန့်လုပ်တာ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ လုပ်တဲ့ အာဏာရှင် စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ အ ခါကျတော့ နှစ်ဖက်လုံးက ထင်သာမြင်သာ မရှိတော့ ဘူး” ဟု ဦးကြီးမြင့်က ဆိုသည်။
ရှေ့နေကွန်ရက်၏ သဘောထား ကြေညာချက် ၄ ချက်တွင်လည်း မြန်မာ- တရုတ် ချုပ်ဆို ထားသည့် စာချုပ်များ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ ပြည် သူကို ချပြရန်အချက်ကို ထည့်သွင်းထားကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
“ဒီ စီမံကိန်းတွေကနေ နိုင်ငံတော်က ဘယ်လောက်ရတယ်၊ ဦးပိုင်က ဘယ်လောက်ရတယ်၊ တ ကယ်ပဲရရဲ့လား၊ ရရင်လည်း အချိုး ဘယ် လောက် ရတယ်ဆိုတာ ထုတ်ပြန်ပေးပါ” ဟု ဦးကြီးမြင့်က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးက နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ကြေညာချက် တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ရာတွင် မုံရွာကြေးနီစီမံကိန်းသည် နှစ်နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အကျိုးတူပူးပေါင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီး စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရွှေ့ပြောင်းမှု လျော်ကြေးငွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကာ ကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးဝင်ငွေ ခွဲဝေမှုဆိုင်ရာကိုလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူ သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်၍ စီမံကိန်းကို ရပ်တန့်မည် မဟုတ် ကြောင်းဖော်ပြထား သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် သံအမတ်ကြီးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများကို ရပ် ဆိုင်းမည် မဟုတ် ကြောင်း ထပ်မံထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ အလွှာအသီးသီးက ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား၊ ၀ိုင်းမော် မြို့နယ်အစရှိသည့် မြစ်ဆုံဒေသတွင် တရုတ် အစိုးရ ပိုင် China Power Industry (CPI) က အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၃၆၀၀ ခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး အေးရှားဝါးလ် ကုမ္ပ ဏီက ဆောက်လုပ်ရေး တာဝန်ယူ တည်ဆောက်သည့် ရေအား လျှပ်စစ်အတွက် ဆည် ၈ ဆည် စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ် မှုများ စဉ် ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ စီမံ ကိန်းများကို ရပ် ဆိုင်းထားမည် ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ အမိန့်ဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများဆုံး နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ရေနံနှင့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ် စစ်နှင့် ဆက်စပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ စသည့် ဘက်ပေါင်းစုံတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ယခုနှစ် သြဂုတ်လအထိ အမေရိကန် ဒေါ် လာ စုစု ပေါင်း ၁၄.၁၄ ဘီလျံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်း တရုတ်အစိုးရ သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တချိန်တည်းတွင် လက်ပံတောင်းဝန်းကျင် မြေသိမ်းမှုကဲ့သို့ စစ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် မြေယာသိမ်းဆည်းမှု ပုံစံများ မှား ယွင်းခဲ့ကြောင်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်နှင့် ၂၅ ရက်နေ့များက နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသော အမျိုးသားအ ဆင့် မြေယာပိုင်ဆိုင် လုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် အသုံးပြုခွင့်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ပြောခဲ့သည်။
လက်ရှိ အစိုးရလက်ထက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် လိုအပ်သည့် အနည်းဆုံး မြေပမာဏကိုသာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ညှိ နှိုင်း ခွင့်ပြုပြီး ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန် “အတတ်နိုင်ဆုံး” လုပ် ဆောင်နေကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သည့် မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း၊ မည်သူ့ထံတွင်မှ အာဏာ မရှိတော့ဘဲ ခေတ်ပြောင်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးတင် နိုင် သိန်းကလည်း ဆိုသည်။
“အခုတော့ ကျနော်တို့ ဒီစီမံကိန်းကြီးတွေကို အစိုးရအဖွဲ့ တဖွဲ့တည်းကနေ ဆုံးဖြတ်လို့ မရတော့ ဘူး။ စီမံကိန်းကြီးတွေ မှန်သမျှ အကုန်လုံး ဟာ နောက်ပိုင်း ဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကို တင်ပြပြီးတော့မှ ဆောင်ရွက်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဧက သောင်းချီ၊ ထောင်ချီပြီး လုပ်တဲ့ ဟာတွေ ကို နည်းဥပဒေနဲ့ ပြန်ထိန်းမယ်” ဟု သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်းက ပြော သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် လယ်ယာမြေ ဥပဒေ ပုဒ်မ -၂၉ တွင် နိုင်ငံတော်၏ ရေရှည် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းကြီးများ အ တွက် လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ – ၃၀ တွင် အများပြည်သူများ အကျိုးငှာ လည်းကောင်း လယ်ယာမြေကို တခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုရန် လျှောက် ထား မှုများ ခွင့်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ပြဌာန်းထားသည်။
“အစိုးရကနေပြီး ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ရမယ့်အပိုင်းပါ။ ပိုပြီးတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ဖြစ်စဉ်တခုရှိဖို့၊ တာဝန်ယူမှုရှိဖို့၊ ဥပဒေမှာ ပါတဲ့အတိုင်း တိ တိကျကျလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တခုရှိဖို့ လို တယ်။ ဥပဒေအတိုင်း မှန်မှန်ကန်ကန် သွားနိုင် တယ် ဆိုရင် ဒီပြဿနာတွေက အထိုက်အလျောက် ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ” ဟု ဥပ ဒေ စိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်နေသည့် တရား လွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးကျော်မင်းစံက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
လတ်တလော ဖြစ်နေသည့် မြေယာ အရှုပ်အရှင်း ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး အ ပိုင်းတွင် တာဝန်ရှိသူများက ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပါအတိုင်း တိတိကျကျ လုပ်ဆောင်ရန် လိုကြောင်း တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦး ကျော်မင်းစံက သုံးသပ်သည်။
နိုင်ငံတော် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် စီမံကိန်းများအတွက် လယ်ယာမြေကို သိမ်းယူရာတွင် အနည်းဆုံး လိုအပ်သည့် ပမာဏကိုသာ သိမ်း ယူရ မည်၊ စီမံကိန်းသက်မှတ် ကာလအတွင်း အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ဖော်ရမည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုပါက မူလ လယ် ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းထံ ပြန်လည် ပေးအပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း လယ်ယာမြေ ဥပဒေ ပုဒ်မ – ၃၂ တွင် ပြဌာန်း ထားသည်။
တနိုင်ငံလုံးတွင် ရှိသည့် မြေအသုံးချမှု အခြေအနေ၊ အချက်အလက်များကို ရယူပြီး လယ်မြေ၊ ယာမြေ၊ သစ်တောမြေ၊ မြို့ပြဧရိယာ၊ စက် မှုဇုံ မြေများ အဖြစ် ခွဲခြားအသုံးပြုနိုင်ရန် မြေယာခွဲဝေ အသုံးချမှု စိစစ် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီက တနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
5:06 AM ko pae Lay No comments
hlyothwetuyin | 12/03/2012 06:55:00 AM |
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသော ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည်
အစိုးရ၀န်ကြီးဌာန ၁၅ ခုက ယမန်နှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အလွဲသုံးစား ထားသောပြုလုပ်ထား ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ များကို နိုင်ငံတော်သို့ ပြန်လည်ပေးသွင်းခြင်း မရှိပါက ၀န်ကြီးဌာနများကို တရားစွဲဆိုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် ဦးသိန်းထိုက်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ယမန်နေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော အရေးကြီးအစီရင်ခံစာတွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ဦးသိန်းထိုက်က အထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ သိရှိရသည်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အစိုးရ၀န်ကြီးဌာန ၁၅ ခုက အလွဲသုံးစားမှု ၄၇ ခုကျူးလွန်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေ ကျပ်ငွေ ၅၈ ဘီလီယံကျော် (ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၈၃၉၈ ဒသမ ၈၁၀) နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃၂၉၇၇ ဒသမ ၃၁၀ ကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ထားသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ထားသည့်ငွေများအနက်မှ ကျပ်ငွေ ၁၇ ဘီလီယံကျော် ( ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၇၄၂၆ ဒဿမ ၇၇၂ သန်း) နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၂၃၂၂ ဒသမ ၂၉၀ ကိုနိုင်ငံတော်က ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီး အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများက ကျပ်ငွေ ၄၀ ဘီလီယံကျော်(ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၀၉၇၂ ဒသမ ၀၃၈) နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၀၆၅၅ ဒသမ ၀၂၀ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သရှိရသည်။
အစိုးရ၀န်ကြီးဌာန ၁၅ ခုအနေဖြင့် အလွဲသုံးစားထားသော ငွေကြေးများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ ရက်မတိုင်မီ ပြန်လည်ပေးသွင်းခြင်းမပြုပါက ပြည်ထောင်စုစာရင်းချုပ်ရုံးက တရားစွဲဆိုမှုများပြုလုပ်မည့်အပြင် ဒဏ်ကြေးပါ သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသဖြင့် သမ္မတ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“၀န်ကြီးဌာန ၁၅ ခုက အလွဲသုံးစားလုပ်ထားတဲ့ငွေတွေကို ၂၀၁၃ ၊ မတ်လ ၁၃ ရက်မတိုင်မီ နိုင်ငံတော်ကို ပြန်ပေးရမယ်။ မပေးရင်တော့ ၀န်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ ဒဏ်ကြေးဆောင်ရမယ်၊ တရားစွဲဆိုခံရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုဒဏ်ကြေးတပ်မလဲ၊ ဘယ်လိုတရားစွဲမှာလဲ အဲဒါတွေကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းအစီရင်ခံစာမှာ ပြမထားဘူး”ဟု လသာမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးကြည့်မြင့်က ပြောပြပါသည်။
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာများကို အလွဲသုံးစားပြုကြသည့် ၀န်ကြီးဌာန ၁၅ ခုတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ၄ ခု၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနက ၆ ခု၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနက ၁ခု၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနက ၂ ခု၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ၄ ခု၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ၅ ခု၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ၃ ခု၊ သစ်တောဝန်ကြီးဌာနက ၃ ခု၊ သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာနက ၂ ခု၊ လယ်/ဆည်ဝန်ကြီးဌာနက ၅ ခု၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာ/အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက ၃ ခု၊ ဟိုတယ်/ခရီးဝန်ကြီးဌာနက ၂ ခု၊ မီးရထားဝန်ကြီးဌာနက ၄ ခု၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ၄ ခု ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ယမန်နှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ကျပ်ငွေ ၄၀ ဘီလီယံကျော် ( ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၀၈၂၈ ဒသမ ၁၂၂) ရရှိမှုမရှိသေးဘဲ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်း အချိန်မီ ငွေပေးသွင်းခြင်းမပြုလျှင် အရေးယူမှုများခံရမည်ဟု သိရှိရသည်။
အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများ၏ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ၀န်ထမ်းအချို့ကို သတိပေးခြင်း၊ အရေးယူမှုပြုလုပ် ခြင်းများပြုလုပ်သည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသော်လည်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖော်ပြခြင်းမပြုဟု သိရှိရသည်။
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်က သမ္မတ၏ အမိန့်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနများ၏ အလွဲသုံးစားမှုကို တင်ပြခြင်းအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော လုပ်ရပ်အဖြစ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့က ကြိုဆိုကြသော်လည်း ယနေ့ထုတ်အစိုးရသတင်းစာများတွင် ယင်းအစီရင်ခံစာအသေးစိတ်ကို ဖော်ပြခြင်းမပြုခြင်းမှုအပေါ် စိတ်ပျက်မှုရှိကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
“ထင်သာမြင်သာရှိသင့်တယ်။ လွှတ်တော်ကိုတောင်တင်ပြထားတာပဲ ပြည်သူတွေဆီကိုလည်း သိသင့်အောင် အစိုးရသတင်းစာတွေ ကနေ ဖော်ပြသင့်တယ်”ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာတွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အသုံးစရိတ်နှင့် တပ်မတော်၏ အသုံးစရိတ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး တစုံတရာ ဖော်ပြခြင်းမရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အစဉ်အလာ ထုံးစံများကို စိန်ခေါ်ခြင်း (ဂျူး)
5:04 AM ko pae Lay No comments
by Crown on Thursday, November 15, 2012 at 8:45pm ·
ကျွန်မဟာ ၀တ္ထုတိုသမားကနေ လုံးချင်းဝတ္ထုရှည်ပါ ရေးသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာဖြစ်လာလဲ ဆိုတော့ စာဖတ်သူတွေနဲ့ ဝေဖန်သူတွေက ကျွန်မကို အမျိုးသမီးဝါဒီ (Feminist) လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီး ၀ါဒီဆိုတာ အဆင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ အမျိုးအစားတွေ ကွဲပြားနေတော့ ကျွန်မက ဘယ်အဆင့်လည်း ဘယ်လိုအမျိုးသမီးဝါဒီလည်း ဒါကိုတော့ ရှင်းဖို့လိုမှာပေါ့နော်။
ဒါပေမဲ့ ဒါက ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ မဖြေရှင်းတော့ပါဘူး။
၀န်ခံရမှာ တစ်ခုကတော့ ကျွန်မက အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားဆိုတဲ့ ကွာခြားမှု Gender ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် နည်းနည်းအမြင်ဆူးရှတယ်လို့ ဆိုနိုင်မလား မသိဘူး။ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Gender ထုံးစံ သတ်မှတ်ချက်တွေ (Gender Stereotyping) ကို အမြဲပဲ စောင့်ကြည့် သတိထားမိနေဖြစ် တယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားကိုပဲ ကြည့်ကြည့် မဂ္ဂဇင်းကိုပဲဖတ်ဖတ် ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုကိုပဲ ကြည့်ကြည့် ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ထမ်းစာရင်းကိုပဲ ကြည့်ကြည့် Gender ထုံးစံ သတ်မှတ်ချက်တွေကို ဖျတ်ခနဲ ချက်ချင်းမြင်တတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်ရတယ်။
ဥပမာဆိုပါတော့ ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေကို ပုံဖော်တဲ့ ဓာတ်ပုံပြကွက်မျိုးနဲ့၊ အမျိုးသားကို ပုံဖော်တဲ့ဓာတ်ပုံပြကွက်မျိုး။ အမျိုးသမီးဆိုရင် အပြင်ပန်းမျက်နှာအလှ၊ ကိုယ်လုံးအလှ မြူဆွယ်တဲ့ အမူအယာမျိုးကိုပဲ ပြတာတွေက များတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ နေရာမျိုး၊ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ သိပ်မတွေ့ရဘူး။ အချစ်ခံ၊ အကြည့်ခံ၊ အယုယခံ တစ်ဆင့်နှိမ့်နေရာမှာ ခဏခဏ ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ အမျိုးသားတွေကိုတော့ ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာတဲ့ အနေအထားမျိုး၊ ပညာတတ်တဲ့ အနေအထားမျိုး၊ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိတဲ့ အနေအထားမျိုး၊ ဥာဏ်ရည်မြင့်တဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ တွေ့ရတာ များတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကိုတော့ ထူးဆန်းတဲ့ အလှပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်အောင် ဘယ်လို အလှပြင်ပစ္စည်းမျိုးကို စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးစွဲတာပါဆိုတာမျိုး ပုံဖော်ကြတယ်။ အသားဖြူခြင်းကိုပဲ ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်အောင် အသားညိုနေတာကို မဖြူမညို အသားလတ်နေတာကိုပဲ အားငယ်စရာလို့ ထင်လာအောင် ကြော်ငြာတွေနဲ့ ၀ိုင်းပြီး ဆွဲဆောင်တဲ့အခါ မိန်းကလေးမော်ဒယ်လ်တွေကို မိန်းကလေးငယ်လေးတွေက အားကျ၊ မိန်းမရဲ့ စွမ်းအားအတွက် အရည်ပြား တစ်ထောက်ပေါ်က အလှကိုပဲ အားကိုးချင်စိတ်တွေ ၀င်လာမလားလို့ ကျွန်မ သံသယအတွေး ၀င်မိတယ်။
ထုံးစံသတ်မှတ်ချက်တွေကို ဘယ်လောက်ထိ လိုက်နေကြတုန်းလဲဆိုရင် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း ကြော်ငြာ၊ အ၀တ်လျှော် အိုးခွက် ပန်းကန်ဆေး၊ ဆပ်ပြာ ကြော်ငြာတွေမှာ အဓိက သရုပ်ဆောင်က မိန်းမပဲ ဖြစ်နေတယ်။ အိုမေ့လို့။ အမျိုးသားပါ ပါဝင်တဲ့ မီးဖိုသုံး ပစ္စည်းကြော်ငြာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ သရုပ်ဆောင် အမျိုးသား ချက်ပြုတ်နေလား။ ဝေးပါသေးရဲ့။ စားကောင်းလိုက်တာလို့ အမျိုးသားက ပြောရင် အမျိုးသမီးက ကောင်းမှာပေါ့၊ ဘာ ငရုတ်သီးမှုန့်ကို သုံးထားတာကိုးလို့ ပြောတဲ့အဆင့်မျိုးက များပါတယ်။
မိန်းမတွေဟာ ပါမောက္ခ ပညာရှင်တွေအဖြစ်သာမက အဆင့်မြင့် အုပ်ချုပ်ရေးနစ်ထဲအထိ တစ်စတစ်စ နေရာပြန်ရလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကောင်းတဲ့ အလားအလာပါပဲ။ အဲဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း အစဉ်အလာ သတ်မှတ်ချက်တွေ လျော့နည်း ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
(သရဖူ မဂ္ဂဇင်း၊ NOV Special Issue မှ ကောက်နုတ်ချက်)
အုတ်ခဲဖြင့်ထုပြီး ပုဆိုးကွင်းစွပ်ကာ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ဆွဲ၍ သတ်ဖြတ်
5:01 AM ko pae Lay No comments
၃၀-၁၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ၂၂၃၀ အချိန် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ တော်ဝင်လမ်းရှိ ““ဇူလိုင်မိုး”” တည်းခိုခန်းအနီး လမ်းမပေါ်၌ လူတစ်ဦး ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေကြောင်း သတင်း ရရှိသဖြင့် ရွှေပြည်သာ ရဲစန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်နေ ဂျပန်ကြီး(ခ)မြင့်သိန်း(၅၄)နှစ်ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာများရရှိကာ လည်ပင်းတွင် ပုဆိုးကွင်းစွပ်လျက် ပက်လက်လဲကျ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ချက်အရ လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းကလေးအုပ်စု၊ ထိပ်နီကုန်းရွာနေ ဇင်မင်းဦး(ခ) ဇင်မောင်(၂၇)နှစ်က အုတ်နီခဲဖြင့်ထုပြီး လည်ပင်း၌ ပုဆိုးကွင်းစွပ်ကာ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ဆွဲပြီး သတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ၀၀၁၅ အချိန် ဇင်မင်းဦး(ခ) ဇင်မောင် (၂၇)နှစ်အား ရွှေပြည်သာရဲစခန်း(ပ)၁၄၃၀/၂၀၁၂ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အရေးယူ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အစ္စရေးနှင့် ဟားမတ်စ် တို့အကြား အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်
4:38 AM ko pae Lay No comments
အစ္စရေးနှင့် ဟားမတ်စ် တို့အကြား အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုများ အရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာသည့် နောက် သောကြာနေ့ ကဂျေရုဆလင် မြို့အနီးသို့ ဟားမတ်စ် တို့၏ ဒုံးကျည်နှစ်စင်း ကျရောက် ပေါက်ကွဲ ခဲ့သည်။
မြို့ခံများသည် လေကြောင်း အန္တရာယ် သတိပေးချက် ဥဩဆွဲ သံ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် အကာအကွယ်များ ရှိရာသို့ အပြေးအလွှား နေရာ ယူခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဒုံးကျည်များသည် မြို့ထဲသို့ မကျရောက်ဘဲ မြို့မြောက်ဘက်ရှိကွင်းပြင်တွင်သာပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
ယခု ပဋိပက္ခများ တင်းမာ မြင့်တက် လာသည့် အချိန်တွင် ဘာသာရေးအရ မြင့်မြတ် သော နေရာတစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည့်မြို့တော်သို့ ပထမဆုံး အကြိမ် ဒုံးကျည် အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက် လာခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
ဂါဇာရှိ ဟားမတ်စ် စစ်သွေးကြွတို့ ပစ်လွှတ်လိုက်သည့် ယင်းဒုံးကျည် များကြောင့် အပျက်အစီးနှင့် အသေအပျောက် မရှိကြောင်း အစ္စရေး ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ကပြောကြားခဲ့သည်။
စက္ကူနှင့်လုပ်သော အာကာသလေယာဉ် ငယ်ကို ဗြိတိန်တို့လွှင့်တင်
မသိရင်တော့ ရယ်စရာ သတင်းလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အမှန် တကယ် လည်း စက္ကူနဲ့လုပ်တဲ့ အာကာသ လေယာဉ်ငယ်ကို ဗြိတိန်က အပျော် တန်း အာကာသ ပညာရှင်များ အဖွဲ့က လွှတ်တင် ခဲ့ပါတယ်။ အာကာသ အထိတော့မရောက်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့လေထုရဲ့ အာကာသမရောက်ခင် ဆက်ကြားအလွှာအထိရောက်ရှိပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ဒုတိယအပတ်ကဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်ရိုးခြောက်နဲ့ လုပ်ပြီး စက္ကူနဲ့ပြန်ဖုံးပေးထားတဲ့ လေယာဉ်ငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး ကစားစရာအရုပ်အရွယ်ပဲရှိပါတယ်။ လေယာဉ်မှာ ကင်မရာများတပ် ဆင်ပေးထားပြီး ဟီလီယံလေပူပေါင်းနဲ့တွဲလို့ လွှတ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လေထုရဲ့ အမြင့်ဆုံးအလွှာထိရောက်ပြီး ကမ္ဘာမြေဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စပိန်နိုင်ငံမှာ လွှတ်တင်တာဖြစ် ပါတယ်။
လွှတ်တင်တဲ့နေရာနဲ့ မိုင် ၂၀ကျော် တောတစ်နေရာမှာ ပြန် လည်တွေ့ရှိပါတယ်။ ကောင်းကင်ဝေဟင်မှ ရိုက်ကူးတဲ့ကမ္ဘာ့မြေပြင် ဓာတ်ပုံများအတွက် များစွာအကုန်ကျခံစရာမလိုဘူးလို့ သက်သေပြ သွားပါတယ်။
သာမာန်ဆိုရင် အာကာသယာဉ်ပျံသို့မဟုတ် လေယာဉ် နဲ့သာရိုက်ကူးလို့ရမယ့်ပုံရိပ်များကို ဗြိတိန်အပျော်တမ်း Space enthusiasts က ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ သက်သေ ပြသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ပဋိပက္ခနှင့် လိုအပ်နေသည့် နိုင်ငံတည်ဆောက်ပုံ
4:35 AM ko pae Lay No comments
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ သတင်းတွေ အားလုံးထဲမှာ ရခိုင်ပဋိပက္ခ သတင်းတွေဟာ မြန်မာပြည်သူအား လုံးကို လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ သတင်း ထုတ်ပြန် ချက်အသီးသီးကလဲ လူထုအတွက် အားတက် စရာ၊ တာဝန်ခံတဲ့ အရာတွေမပါခြင်းကြောင့် လူထု ကလဲတွေဝေနေခဲ့ရပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းက သတင်းစာမှာ သတင်းထုတ်ပြန်စာနဲ့၊ သမ္မတရုံး ထုတ်ပြန်ချက်၊ မှူးဇော်ရဲ့ ဖေ့ဘုစ် ထုတ် ပြန်ချက်တွေသာရှိပြီး တာဝန်ခံထွက်ပြောတာမျိုး၊ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ တုန်လှုပ်ခြောက်ချားစေတဲ့ အဖြစ်အပျက် ကြီးမှာ အမြင်အမျိုးမျိုးတွေကို ပြည်တွင်း ဂျာနယ်အသီးသီးနဲ့ ပြည်ပမီဒီယာအသီးသီး ကလည်း တင်ပြခဲ့ကြပြီးဖြစ်လို့ လူထုကတစ်စုံ တစ်ရာ တွေးဆလို့ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိ သူများအပိုင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစု အသီးသီး ကလည်း ဒီကိစ္စမှာ တစ်စုံတစ်ရာ ထိထိရောက် ရောက်ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ အကန့်အသတ်ရှိနေပုံရပါ တယ်။ ပြည်တွင်းစစ် နှစ် ၆၀ ခရီးမှာ လူထုတွေ ဒုက္ခခါးစည်းခံခဲ့ရတာတောင် တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားခြင်းမခံရတဲ့၊ ယေဘုယျငြိမ်း ချမ်းပါတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာပြည်ဟာ အခုတော့ မတည်ငြိမ်မလုံခြုံတဲ့ဒေသ (့သအျစသအျ) အဖြစ် ကျုံးသွင်းဖို့ ကြိုးစားခံနေရပါပြီ။ ဒီဖြစ်ရပ်ဖြစ်စဉ်တွေဟာ ဘာကိုဦးတည်တာ လဲ၊ ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ကိုင် ဆောင် ရွက်စီမံကြမှာလဲ စသဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ဟာ ပြည်သူလူထုကလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်ကြသလို၊ မီဒီယာသမားများကလည်း တိတိ ကျကျမတင်ပြနိုင်ပါဘူး၊ အနီးစပ်ဆုံး ရိပ်သံ၊ဖမ်း သံလောက်တော့ တင်ပြနေကြတာပါ၊ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်နဲ့ သိမ်မွေ့နက်နဲ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေမှာ တစ်ခုခု တာဝန် ခံဖို့ အခက်တွေ့နေရတာအမှန်ပါ၊ မီဒီယာတွေကတော့ တိတိကျကျသိရှိမှသာ လူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြလို့ရမှာပါ။ ဒီကိစ္စမှာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေရဲ့ ထိန်း ထိန်းသိမ်းသိမ်းပြောဆိုချက်လောက်သာ တင်ပြ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လူထုရော၊ မီဒီယာတွေရော သက်ဆိုင်သူတွေရဲ့ ရှင်းလင်းပြောဆိုတာကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ အခြေအနေပါ။ မှူးဇော်ရဲ့ င်္ခေနဘသသု မှာ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်တဲ့သူ တွေရှိတယ်ဆိုတာက လူထုရဲ့စိတ်မှာ ပိုပြီး မအေးမချမ်းဖြစ်စေပါတယ်။ လူထုကို ကြိမ်မီးအုံး သလိုဖြစ်စေပါတယ်။ လူထုက မည်သို့ပင် သဘောထားသည်ဖြစ် စေ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ကိုင်တွယ်ထားတဲ့သူ တွေရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အာဏာအောက်မှာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေရှိတယ်။ ဝန်ထမ်းအသီးသီးနဲ့ အုပ် ချုပ်ရေးယန္တရားတွေရှိတယ်။ အမိန့်တွေ၊ အာဏာ တွေရှိတယ်။ အကျဉ်းထောင်တွေရှိတယ်။ ငွေတွေရှိတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ် စသဖြင့် ဒီအာဏာရဲ့အောက်မှာ အတောင်အ လက်အစုံရှိပါတယ်။ လူထုမှာ ဘာမှမရှိပါဘူး၊ အာဏာပိုင်စိုးသူကို မြန်မာစာပေမှာ သမုတိနတ် လို့တောင် တင်စားထားကြပါတယ်။ ရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ ကိစ္စဟာ တစ်ပြည်လုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ တစ်ပြည်လုံး စိတ်၏မလုံခြုံ ခြင်း၊ ကိုယ်၏ မလုံခြုံခြင်းခံစားရမှာပါ။ မည်မျှ ပင် သိမ်မွေ့နက်နဲသည်ဖြစ်စေ လူထုအားကိုး လောက်တဲ့ ရပ်ခံပြောဆိုမှုမျိုး လိုအပ်နေပါတယ်။ လူထုကို ဘာပြောကြမလဲ၊ လူထုက ဘယ်သူ့ ကိုအားကိုးရမလဲ။ လူထုက အားကိုးရာမဲ့နေပြီ လား၊ လားပေါင်းများစွာ ဘယ်အထိထိုင်ကြည့် နေကြမလဲ။ ရခိုင်မှာ ဓာတ်ငွေ့တွေရှိတယ်။ ရေနက်ဆိပ် ကမ်းကြီးတွေလည်း ဖြစ်လာမယ်။ တရုတ်ရေနံ ပိုက်လိုင်းကြီး တွေလည်းရှိတယ်။ သယံဇာတတွေ လည်းရှိတယ်၊ ကောင်းမွန်မျှတတဲ့ ရာသီဥတု ရှိတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားတဲ့ လူမျိုးတွေရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစေ့ အရင် ချနိုင်ခဲ့တယ်။ ရှည်လျားတဲ့ ကမ်းရိုးတန်းက အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို မေးတင် ထားတယ်။ နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီ ဒီမြေဒီရေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် နိုင်ခဲ့တယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ သယံဇာတတွေနဲ့ ချစ်စရာယဉ်ကျေးမှုတွေရှိတဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဈေးကွက်ကြီးရဲ့ အချက်အချာမှာရှိ နေတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဈေးကွက်လုပွဲ ကြီး၊ နေရာလုပွဲကြီးရဲ့ မြေဇာပင်မဖြစ်သင့်ပါ။ မြန်မာလူမျိုးတို့က ကမ္ဘာကြီးကို အနှောင့်အယှက် မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်အကူအညီ လည်း မရခဲ့ပါဘူး။ အခုအကူအညီတွေ လိုနေပါ တယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၁၈၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ မှာ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ရှုံးရခြင်းအဖြစ် ချုပ်ဆိုခဲ့ တဲ့ ရန္တပိုစာချုပ်ပြီးကတည်းက ဒီဒေသတွေဟာ အရင်းရှင်ကိုလိုနီစနစ်နဲ့ အင်ပါယာဝါဒရဲ့ လက် အောက် ကျရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ထီးပြိုင်၊နန်းပြိုင် ဒေသများဖြစ်သော်လည်း တစ်မြေထဲ၊ တစ်ရေထဲ ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြေ၊ဒီရေသားတို့အချင်း ချင်း အရင်းရှင်ထမ်းပိုးအောက်က လွတ်ပြီးပေါင်း စည်းမိတာ နှစ် ၆၀ခရီးပဲရှိပါသေးတယ်။ ခိုင်မာ တောင့်တင်းတဲ့ နိုင်ငံကို ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမလဲဆို တဲ့ ( State Structure ) အရေးကြီးလာပါပြီ၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ( State Structure ) နှစ်ကြိမ်ပြောင်းခဲ့ရပြီးပါပြီ။ ရေရှည်တည်ငြိမ်တဲ့ အားလုံးသဘောတူညီတဲ့ ( State Structure ) ဟာ အမြန်လိုအပ်နေပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ စာအုပ်တွေထဲက တွေ့ရှိတာ လေးတွေ စဉ်းစားမိဖို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အင်ပါယာဝါဒ ( Imperialism )ရဲ့ အခြေခံ ကတော့ လွှမ်းမိုးတဲ့ လူမျိုးက လွှမ်းမိုးမခံရတဲ့ လူမျိုးအပေါ်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအရ၊ စီးပွားရေးအရ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ၊ နယ်မြေချင်းဆက်ဆံရေးအရ၊ လူမျိုးချင်းဆက်ဆံရေးအရ ကိစ္စအဝ၀မှာ ခွဲခြား ဆက်ဆံပြီး မညီမမျှအခြေအနေကို ရေရှည်ထိန်း သိမ်းပြီး ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလိုနီဝါဒ ( Colonialism )ရောမခတ် မက် ထရိုပို ( Mather of City )အယူအဆက လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်မြေတစ်ခုမှာ ရှိတဲ့လူတွေကို အခြားနယ်မြေကလူတွေက စိတ်ကြိုက်နေရာချ ထားပြီး ထိန်းချုပ်ကျင့်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကတိုက်ကို ဥရောပအရင်းရှင်တွေ စီမံ ခြယ်လှယ်ပုံမျိုးပါ။ မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒ ( Chauvinism )တွေ ကျဉ်း မြောင်းတဲ့လူမျိုးရေးဝါဒ ( Narrow National ) တွေ၊ လူတစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံဝါဒ ( Tirbal National ) တွေ၊ လူမျိုးစုံဝါဒ( Multi National )တွေ မျိုးစုံနေ တဲ့ အခြေအနေမှာ ခိုင်ခံ့တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ပုံ ( State Structure )တစ်ခုအဖြစ်တည် ဆောက်ဖို့ လိုနေကြောင်း လူထုပုံရိပ်က အကြံပြုရေးသား လိုက်ရပါတယ်။
ဟောလိဝုဒ်လှပျိုဖြူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ် ထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက်များ
ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် လှပကြည့် ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ ဟယ်လီ ဘယ်ရီ၊ ဟေဒီ၊ ဂျနီဖာအနစ္စတန် နဲ့ ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်တို့ရဲ့ သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာ ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်း ထားတယ်ဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါ တယ်။
ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် စမတ်ကျအောင် ဘယ်လိုထိန်းသလဲ
(၁) အစာကို ပုံမှန်စားပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုရဲ့ အမှားကြီး တစ်ခုက ကယ်လိုရီတွေကို အလွန်အမင်း ဖြတ်တောက် လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုနှေးပြီး အားမရှိသလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း အစာပြန်စားတဲ့အခါ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာပါတယ်။
(၂) ဒါပေမဲ့ အစာကို ဖြည်းဖြည်းပဲ စားပါတယ်။ အစာ တစ်လုတ်စားပြီးတဲ့အခါ ဇွန်းခက်ရင်းကိုချပြီး တစ် ကနေ ၁၀ အထိ ရေတွက်ပါတယ်။ ဒါက ဦးနှောက် ကို အစာအိမ်က ဗိုက်ပြည့်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အချက် ပြခွင့်ပေးလိုက်တာပါ။
(၃) လှုပ်ရှားမှု လုပ်ပါတယ်။ အဓိကက ပေါင်အတွင်း၊ အပြင် ကျစ်လျစ်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပါ။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဖဲချပ် ၁၀ ချပ်ကို ချထားပါ။ ပြီး ရင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ဖဲချပ်တစ်ချပ်ကို ကောက် ယူပါတယ်။ အဲဒီနောက် ညာဘက်ကို ခြေလှမ်းလေး လှမ်းလောက် ရွေ့လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဖဲချပ်အပုံတွေ ဆီ ပြန်လာပြီး နောက်တစ်ချက်ကို ကောက်လိုက်၊ ညာ ဘက်ကို ခြေလှမ်း လှမ်းလိုက်..ဖဲချပ် ၁၀ ချပ် စလုံး ကောက်ယူပြီးတဲ့အထိ ပြုလုပ်ပေးပါ။
(၁) တင်ပါးကို ကော့ပြီး ထိုင်ထလေ့ကျင့်ပါတယ်။ ဒါက တင်ပါးတင်မက ပေါင်အပြင်ပိုင်းနဲ့ ခြေသလုံး တွေကိုပါ သန်စွမ်းစေလို့ပါ။
(၂) သင့်အနေနဲ့ ကြိုးခုန်တာ၊ အလေးမတာ၊ ပြေးတာ ..ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုပဲ လုပ်လုပ် သင့်တံ တောင်ဆစ်နဲ့ ဒူးတွေကို ထိန်းချုပ်မထားပါနဲ့။ ဒီအ စိတ်အပိုင်းတွေကို ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ထားရှိ လိုက်ပါ။ ဒါမှ အဆစ်ထိခိုက်မှု မဖြစ်အောင်ကာကွယ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) တင်ပါးလှစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်ပြုလုပ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းကတော့ ၄-၁၀ပေါင်ကြား အလေး တုံးကို လက်နှစ်ဖက်ကို အဖြောင့်အတိုင်းထားကာ ခေါင်းပေါ်မြှောက်ကာ မယပါတယ်။ ပြီးရင် တတ်နိုင် သလောက် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ အတိုင်း ရှေ့ကို ခြေလှမ်းနည်းနည်း ရွှေ့ကြည့်တာ၊ နောက်ကို ဆုတ်တာတို့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
(၁) အမြင့်တက်ပြီး လမ်းလျှောက်တာက အကောင်း ဆုံး နှလုံးသန်စွမ်းစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သင့်တင်ပါး၊ ပေါင်နဲ့ ခြေထောက်အောက်ပိုင်း တွေကို တင်းရင်းစေပြီး ဒူးတွေကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။
(၂) လက်မောင်းနဲ့ ပခုံးသားတွေ သန်မာစေတဲ့ ပစ္စည်း Dumbbells ဟာ အလေးတုံး သီးသန့်တွေထက် ပိုပြီး ကြွက်သားတွေကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။ အကြောင်းက တော့ ဒီအသုံးအဆောင်တွေက ညှိယူစရာမလိုတဲ့အ ပြင် ခန္ဓာကိုယ်ကို သဘာဝကျကျ လှုပ်ရှားနိုင်စေပါတယ်။
(၃) လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို လိမ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါတယ်။ ဒါက ဝမ်းဗိုက်ဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ အဆီပိုတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းကတော့ ဖျာတစ်ချပ်ပေါ် ဒူးကွေး ပြီး မတ်မတ်ထိုင်ပါ။ အဲဒီအနေအထားနဲ့ အနောက် ဘက်ကို အနည်းငယ်လှန်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ညာဘက် လက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်ဘက်အခြမ်းကို ပွေ့ဖက် တာ၊ ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ညာခြမ်းကို ပွေ့ဖက် တာကို ၁၀ ကြိမ် ပြုလုပ်ပါတယ်။
(၁) လှေကားတက်ရင် ခပ်မြန်မြန် တက်တဲ့နည်းကို ရှောင်ပါတယ။် ဒီနည်းဟာ ကြာကြာနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း တက်တာထက် ကြွက်သားတွေကို အလုပ်လုပ်ဖြစ်နှုန်း နှေးပြီး ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းနှုန်း လည်းနည်းပါတယ်။
(၂) အလေးမတဲ့ အကြိမ် တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ကြိမ်ကြား သုံးမိနစ်ထက်ပိုပြီး မနားပါနဲ့။ အကြာကြီးနားရင်ြွကက်သားတွေ သွေးအေးသွားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ အကျိုး အာနိသင် လျော့ကျသွားနိုင်လို့ပါ။
(၃) ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ လက်မောင်းတွေ ကျစ်လျစ်အောင် လုပ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းကတော့ လက်တစ်ဖက် တစ်ချက် မှာ ၅-၈ ပေါင်ခန့်လေးတဲ့ Dumbbellကို ကိုင်ပြီး ဦးခေါင်းပေါ် ရောက်တဲ့အထိ မပါ။ ပြီးရင် ဦးခေါင်း ဘေးကနေ Dumbbell ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း နှိမ့်ချ လိုက်ပါ။ ဒီနည်းအတိုင်း တစ်နေ့ သုံးကြိမ် လေ့ကျင့် ပါတယ်။
▼ December (677)
မီးလောင်တိုက်(ကဗျာရှည်လေးပါ အဆုံးထိ သည်းခံဖတ်ပေးပါ...
စစ်တွေမြို့မှ အမျိုးသမီး တစ်ဦး လက်ပံတောင်းတောင် အ...
ကမ္ဘောဒီးယားရှိ တရုတ်ဆောက် ဆည် ပြိုကျ၊ အလုပ်သမား လေ...
တန်ဆောင်တိုင် မဏ္ဍပ်မှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ဒေါ်စု ပြက္ခဒိန...
သီချင်းနားထောင်ရင် ဂီတာ လက်ကွက်ပါပြတဲ့ Go PlayAlon...
မိုးကုတ်မြို့ ရှိ သံဃာတော်များ လက်ပံတောင်းတောင်အရေ...
အုတ်ခဲဖြင့်ထုပြီး ပုဆိုးကွင်းစွပ်ကာ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ဆ...
အစ္စရေးနှင့် ဟားမတ်စ် တို့အကြား အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက...
စက္ကူနှင့်လုပ်သော အာကာသလေယာဉ် ငယ်ကို ဗြိတိန်တို့လွှင...
ဟောလိဝုဒ်လှပျိုဖြူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ် ထိန်းသိမ်းနည်း လ...
အိုက်စလန် မီးတောင်များမှ ဘူမိ အပူ စွမ်းအင်ကို လျှပ...
ဂျပန်တွင် ဥမင်လှိုင်ခေါင်းပြိုကျ၊ အနည်းဆုံး လူ ၉ ဦး...
တရုတ်တွင် မြေသိမ်းခံရလျှင် လျော်ကြေး ဆယ်ဆရ
လက်ပတောင်းတောင်အရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ ဦးဆောင်သူ (၆) ...
ဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် လူနာတင်ကား မီးသတ်ကား ကျန်...
))) တရုတ်နှင့်အန္ဒိယမြန်မာပြည်ကို ဘာကြောင့်လိုအပ်နေ...
အာရှမှာ အကြီးဆုံးဆိုတဲ့ မုံရွာ လက်ပံတောင်းတောင်ြေ...
DKBA ကပြောပြီ xxxxxxxxxxxxxx တာဝန်ရှိသူတွေကို အစို...
Blog ၀ါသနာရှင်များအတွက်...အခမဲ့ Blog တစ်ခုဖန်တီးခြ...
အသုံးဝင်မည့်ဆော့ဝဲ Serial Number များ
မြန်မာ ≠ ဂျပန် (ဘာတွေလိုနေတာလဲ) ? (ကိုယ်ပိုင်စာပေစ...
အညာမှာပေါတဲ့ ဆီး (ဇီး) သီး တန်ဘိုး ဒီ(၉)မျိုး
မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင် ( 1 +2+3)
...........မြွေဟောက် မြွေပွေး ပိစိကွေး...............
မလေးရှားရောက် ဆိုင်ကယ် စီးသူများ မော်တော်ယာဉ်မောင်...
စိန်​စီ​ထား​သည့်​​ ​ဂြိုလ်​တစ်​လုံး​​ ​ရှာ​ဖွေ​တွေ...
*** သီလငယ် နှစ်ဆယ့်လေးပါး (စူဠ သီလ) ***
Desktop ကိုအလှဆင်တဲ့ Software တစ်ခုပါ......
လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှု ၊ ငါးပါးသီလ နှင့် အပျိုစင် လူပျ...
ကိုယ့်အသားကို ပြန်စားသော ရောဂါ - LNS
ဗိုက်ခေါက်ထူ အ၀လွန်သူတွေအတွက် ဆေးနည်း
အဝလွန်သူများအတွက် ရှောက်ရွက်၏ အစွမ်း
၁၅ ဒေါ်လာတန် Simcard များ Sea Game မှာရောင်းချပေးမည...